MCSE လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး - သင်သိရန်လိုအပ်အားလုံး - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
2 သြဂုတ် 2017
အဘယ်အရာကို MCSE နည်းလမ်းများ?
Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) အိုင်တီဒီဇိုင်း, ဖြေရှင်းချက်များနှင့်လုံခြုံရေးများ၏ domains များအတွက် excel လိုသူများအတွက်ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ / အင်ဂျင်နီယာများများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့လက်မှတ်သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး MCSE အောင်လက်မှတ်အခြေခံအဆောက်အအုံဒီဇိုင်းအဖြစ်ကို install, configure, စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် troubleshoot နိုင်စွမ်းသူတို့နှင့်အတူတပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးအိုင်တီပရော်ဖက်ရှင်နယ်၏လုပ်ငန်းခွင်လဒ်ပေါ်ပေါက်။ အဆိုပါလက်မှတ်ကိုလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များကို / န်ဆောင်မှုများပေးရန်ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်စနစ်များကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များ၏စွမ်းရည်ကိုပြသသည်။
အဘယ်သူသည် MCSE အောင်လက်မှတ်ပေးအပ်?
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ရှင်းလင်းစွာအကြံပြုထားသကဲ့သို့, ဒီလက်မှတ်ကို Microsoft အားဖြင့်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဦးက Microsoft ကအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် Microsoft နည်းပညာအသုံးပြုမှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု validates ။ အဆိုပါ MCSE အောင်လက်မှတ်ကိုအောင်မြင်စွာစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လက်တွေ့ကျကျနှင့်ဘက်စုံအမျိုးမျိုးသော Microsoft ကထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်ဖို့တစ်ဦးချင်းရဲ့စွမ်းရည်အပျေါမှာတညျဆောကျဖို့ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်သော Microsoft Certified Professional က (MCP) အရလာကြောင်းအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်အစုတခု၏လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဘာလဲ MCSE ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ?
တစ်ဦး MCSE အောင်လက်မှတ်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်မြင့်မားတဲ့အဆုံးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကို enable ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရန်လိုအပ်သည်ကျွမ်းကျင်မှုလေ့လာသင်ယူ
ဒီဇိုင်းတစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုအခြေခံအဆောက်အအုံသို့မဟုတ်ယင်း၏ဒြပ်စင်အကောင်အထည်ဖော်ရန် & troubleshoot;
အဆိုပါဒေတာ, စနစ်များ & ယင်း၏အထောက်အထားတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရန်,
အဆိုပါ MCSE စာမေးပွဲ၌ထင်ရှားစေရန်, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးရှိရမည် MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်.
ရွေးကောက်တော်မူသော module တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးသင်တန်းအရှည်2လ6လမှအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။
အဆိုပါ MCSE အောင်လက်မှတ်သင်တန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ:
သငျသညျအပေါငျးတို့သဖော်ပြခဲ့တဲ့အမျိုးအစားထဲမှာ MCSE ရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမျိုးအစားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထားတဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သော့ချက်နည်းပညာများရှိပါတယ်:
Mobility ကို -မိုက်ကရိုဆော့ဖ Intune, Azure Active Directory, Azure ငြ့်အရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု, System ကိုရေးစင်တာ Configuration Manager ကို, Window System ကိုရေးစင်တာ
မိုးတိမ်ပလက်ဖောင်းများနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦ -Windows Server Virtualization နှင့် Microsoft Azure
ကုန်ထုတ်စွမ်းအား -စီးပွားရေး & SharePoint များအတွက် Microsoft က Office ကို 365 Microsoft က Office ကိုချိန်း, Skype ကို
ဒေတာများကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Analytics မှ -SQL server ကို
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Applications ကို -Microsoft က Dynamics ကို 365, SQL Server
ဒါကြောင့်လိုအပ်ပါသည်အဘယ်ကြောင့် MCSE recertification- ကဘာလဲ?
အဆိုပါ Microsoft ကအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နေသမျှကာလပတ်လုံးကုမ္ပဏီများလက်မှတ်အောက်မှာဖုံးအုပ်သောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုနေသည်အဖြစ်များအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့နှင့်တရားဝင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိကျော်, အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းအနားယူနှင့်အမွေဖြစ်လာသည်။ Microsoft ကနည်းပညာအသစ်မွမ်းမံမှုများအခြိနျမှနျမှဖြန့်ချိနေကြပါတယ်အဖြစ်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်နေဖို့သူတို့ရဲ့ MCSE အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်သက်တမ်းတိုးဖို့အားလုံးကိုအိုင်တီပညာရှင်များလိုအပ်သည်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ recertification မူဝါဒအ updated သိရသည်။ အခါအားလျော်စွာအခါအသစ်များနည်းပညာများနှင့်၎င်းတို့၏စာမေးပွဲများအားဖြင့်မိတ်ဆက်ကြပါသည် Microsoft က, အိုင်တီပညာရှင်များကိုလည်းထိုအစာမေးပွဲယူခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာ upgrade ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ဦး MCSE အောင်လက်မှတ်စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်စွမ်းအဖြစ်နည်းပညာများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှစ်ဦးစလုံးတရားစီရင်တော်မူရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကမိုက်ကရိုဆော့ဖစာမေးပွဲဖြေဆိုရှင်းလင်း 70% ဂိုးသွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးစုစုပေါင်းလက်ကျန်ငွေရာခိုင်နှုန်းရယူခြင်းမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ တဦးတည်းတဦးတည်းစွမ်းရည်အစုများနှင့်အခြားကျွမ်းကျင်မှုအစုံအတွက်အနိမ့်ရာခိုင်နှုန်းအတွက်မြင့်မားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းရရှိသွားတဲ့ဆိုပါကတစ်ဦးကျရှုံးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ ဒီတော့ခြုံငုံပြင်ဆင်မှုအရေးကြီးပါသည်။ ဒါ့အပြင်အစားပဲ rote သင်ယူမှု၏လက်တွေ့ကျတဲ့အသိပညာလိုချင်သောရလာဒ်များအရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး MCSE အောင်လက်မှတ်ရဖို့, ခုနစျစာမေးပှဲကိုရှင်းလင်းရန်လိုအပ်နေပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီစာမေးပွဲတွင်အဘို့ပေါ်ထွန်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရူပီးကုန်ကျသည်။ 8000 ။ အဆိုပါအပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်သည့်လေ့လာမှုပစ္စည်းနှင့်လေ့လာမှုလမ်းညွှန်ပါဝင်သည်။
တစ်ဦးကသမ္မတလောင်း Microsoft ကသင်တန်းစင်တာများအနေဖြင့်အကူအညီဖြင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လေ့လာဖို့ရွေးချယ်စေခြင်းငှါတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြည်ကြည်အဖွဲ့အစည်း join ပြီးစနစ်တကျထုံးစံအတွက်စာမေးပွဲဖြေဘို့ပြင်ဆင်နေအတွက်အကူအညီရနိုငျသညျ။
တစ်ဦး MCSE စာမေးပွဲကို 150 မိနစ်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခံရဖို့ရှိပါတယ်။ သို့သော်သူ၏မိခင်ဘာသာစကားအင်္ဂလိပ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်အင်္ဂလိပ်စာမေးပွဲယူရွေးယူဘူးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်တစ်ဦးမဟုတ်တော့ကြာချိန်ခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံအများစုတွင်, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်ဤစာမေးပွဲယူနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ Pearson Vue စင်တာများ, ရှိပါတယ်။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတစ်ကြည်ကြည်လေ့ကျင့်ရေးဌာန join ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီဆိုပါကမှတ်ပုံတင်နှင့်လက်မှတ်များ၏အမျိုးမျိုးသော module တွေအဘို့ပေါ်ထွန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုကူညီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စင်တာများရှိနိုင်ပါသည်။
ဘယ်လိုတစ်ခု MCSE လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအသုံးပြုသွားမည်ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
၎င်းတို့၏နည်းပညာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုအတည်ပြုရန်အားဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်မီစံတစ်ခု MCSE အောင်လက်မှတ် ups အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏လုပ်ငန်းခွင်မပြည့်စုံဘဲလျက်။ သူတို့ကကွန်ပျူတာထောက်ခံမှုအထူးကုနှင့်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးလေ့လာဆန်းစစ်အဖြစ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါလက်မှတ်မျိုးစုံဒီဇိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွမ်းကျင်မှု, အကောင်အထည်ဖော်နှင့် Microsoft ဆာဗာကိုပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု. နည်းပညာအခြေခံအဆောက်အဦများ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြား။
တစ်ဦး MCSE လက်မှတ်ရပရော်ဖက်ရှင်နယ်အောက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့လယ်ကွင်းထဲမှအလုပ်အခန်းကဏ္ဍကိုရွေးချယ်နိုင်သည်
Network မှ / စနစ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ်
Software ကို Developer တွေ
Network မှစစ်ဆင်ရေး Analyst,
ကမ်ဘာပျေါတှငျအပေါငျးတို့သကြည်ကြည်အမှတ်တံဆိပ်အပါအဝင်အများစုမှာအဖွဲ့အစည်းများသည် Microsoft ထုတ်ကုန်ကိုသုံးပါနှင့် MCSE certified ရရှိထားပြီးတစ်ဦးချင်းစီရှာကြာလော့။ ဒီသင်တန်းကနေဝယ်ယူကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းမှာမတူညီအိုင်တီစနစ်များကိုမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်နှင့်ဤအရပ်ပုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအကျိုးစီးပွားသူ့ဧရိယာရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောလစာပိုကောင်းတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအစုံနှင့်အတူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရေးဆွဲနှင့်ဤရုံစာမေးပွဲဖြေဆိုရှင်းလင်းများ၏အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်နေကြသည်။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့လက်မှတ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်ဘွဲ့ဒီဂရီအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုလျှင်တစ်ခု MCSE certified ရရှိထားပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်နိုင်တဲ့သက်သေကိုကြီးထွားရန်မန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။
CCNA လက်မှတ်ရပညာရှင်များ - အင်တာဗျူးမေးဖြေ